Chikafu Bhegi fekitori muChina, Cannabis Bhegi, Pepa Bhegi, biodegradable bhegi - Beyin kurongedza
Beyin kurongedza inyanzvi yekupakata bhegi mugadziri, isu tinogadzira nekugadzira mabhegi ekofi, mabhegi e cannabis, mabhegi eti, masaga echikafu, mabhegi enzungu, mabhegi emichero akaomeswa, mabhegi ezviyo, mabhegi ezvipfuyo, mabhegi eupfu, mabhegi emuto, mabhegi emuchina, kudzosera mabhegi, mabhegi efiriji, mabhegi espout, mabhegi emapepa, mupumburu wefirimu, nezvimwe, mabhegi anogadzirwa nemafuta anowoneka.
Masaga emabhegi akasiyana kubva pa0g kusvika pa1b Kune akawanda akagadzirira kutumira mamodheru, senge makuki, runtz, jungle mukomana, skittle, keke remuchato, newds tambo, bhuruu kurota, nezvimwewo zvakare isu tinogona kuita mhando dzakawanda dzevana kuramba bhegi, sepiniki N yakatsvedza bhegi, mbiri zipi bhegi, inotsvedza zipi bhegi, etc. Huya uwane rumwe ruzivo nezve zvakawanda zvakagadzirira kutumira mabhegi uye mabhegi etsika!
Kofi bhegi inozivikanwa kwazvo pasirese, kazhinji inogona kunge yakati sandara bhegi, simuka bhegi, divi gusset bhegi uye yakati sandara pasi bhegi. Zvezvinhu, vangangoita vese vatengi vanofarira foil yakarongedzwa mukati, asi vamwe vakaita semat pedza nepo vamwe vakaita kunge kupenya. Kune vharuvhu, kana chigadzirwa chako chiri bhinzi kofi, ipapo iwe uchazoda imwe nzira vharuvhu kuti ibudise mweya kubuda, nepo kana chigadzirwa chako chiri chepfu yekofi, zita zvaro hapana chikonzero chevhavha.
Kraft bepa rakagadzirwa ne kraft pulp, kazhinji iri yakajeka brown, kirimu kana chena ruvara. Iyo inoshanduka uye yakasimba, ine yakakwira kuputika kuramba, inogona kumira kwakanyanya kusagadzikana uye kumanikidza, chinhu chakanaka chekutakura. Uye zvakare, nekuti kraft bepa iri eco-inoshamwaridzika uye inogadziriswazve, uye yakanaka, iko zvino yave kuwanda uye kukurumbira.
Spout bhegi inoshandiswa zvakanyanya kune zvinwiwa, masosi, uye chikafu chevacheche, nezvimwewo Pane hukuru hwakawanda hwemabhegi eshopu, senge 50ml, 100ml, 150ml, 250ml, 500ml, 1000ml, nezvimwe. Inogona kuve yepamusoro yakavhurika, yepamusoro spout kana padivi spout, yakajairika spout kana mwana kuramba spout yechikafu chevacheche, hapana zipi, yakajairika zipi kana mbiri zipi.
Kazuo Beyin Mapepa nePurasitiki Kurongedza Co, Ltd. iyo yakatangira Xiongxian Juren Pepa uye Plastiki Kurongedza Co, Ltd, yakavambwa muna 1998 pakutanga chaipo.Mushure memakore anopfuura makumi maviri budiriro, ikozvino Beyin kurongedza kwakagadzirwa kuve kune chinobereka. bhizinesi iro rakasarudzika mukugadzira uye kuburitsa inochinjika mapurasitiki ekupakata mabhegi. Simba rekugadzira rinogona kusvika 60million RMB gore rega; 7 mashopu akavakwa ne50 seti indasitiri inotungamira michina yakaiswa.Pane vanopfuura zana vashandi vanoshanda muBeyin kurongedza, makumi mashanu acho inyanzvi dzehunyanzvi dzakakwanisika nekudhinda tsika chitupa, gumi vakuru mahunyanzvi vatotanga kutora indasitiri yekurongedza kwe10years. Vapfumi vane ruzivo vashandi vanogutsa zvizere zvese zvinodiwa nevatengi.
Beyin kurongedza kwakabhadharira vashandi vavo kuita iyo nucleic acid kuyedza
Beyin kurongedza kwakabhadharira vashandi vavo kuita nucleic acid kuyedza Parizvino, mamiriro ekudzivirira denda uye kutonga muProvince yedu yakanyanya, vanhu vazhinji uye vazhinji vanosarudza kuita nucleic acid nemari yavo ...
Maitiro ekusarudza ako anoshanduka ekupakata saga saga?
Maitiro ekufunga yako inoshanduka chikafu kurongedza bhegi saizi? Kuve kuri muindasitiri yekurongedza kwemakore akawanda kudaro, Mubvunzo unonyanya kubvunzwa ndeyekuti ungasarudza sei saizi yehomwe yangu yekurongedza? Kupakira chinhu chakakosha kune chero chigadzirwa, uye kunyangwe im ...
Yevasikana inofarira Kisimusi yekudya tudyo chipo chaizvo yakango chinja kurongedza！
Yevasikana inofarira Kisimusi yekudya tudyo chipo chaizvo yakango chinja kurongedza！ Kisimusi iri kuuya nekukurumidza. Iri harisi chete zuva rinogutsa kuuya kwegore idzva, asiwo izuva iro munhu wese paanopa zvipo kune mumwe nemumwe uye achiratidza kunetseka ...